Naya Bikalpa | रामशाह पथ देखेरै पर पर भाग्नेहरु कायर हुन – गगन - Naya Bikalpa रामशाह पथ देखेरै पर पर भाग्नेहरु कायर हुन – गगन - Naya Bikalpa
रामशाह पथ देखेरै पर पर भाग्नेहरु कायर हुन – गगन
प्रकाशित मिती: २०७७ माघ १६, २०: ०६: ५४
शहिद दिवसको अवसरमा शुक्रबार कांग्रेस काठमाडौं ६नम्वर क्षेत्रिय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम बोल्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले यो संविधान जनआन्दोलनसँग मात्र होइन, हाम्रो सम्मान र स्वतन्त्रतासँग जोडिएकोले संसदको विघटन संविधानको विघटन भएको वताए ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले जुन जगमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनु भयो । उहाँ हेड मिस्त्री पनि हो । उहाँलाई घर बनाउन अस्त्र पनि दिइयो । तर शास्त्र नपढेका ओलीले अस्त्र प्रयोग गर्न नजान्दा त्यही घरको जगमा हम्मर हान्न थाल्यो’, थापाले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै भने ‘वरीपरी रहेका आशेपासे र धुपौरेहरुले प्रभू तपाईले गल्ती गर्नुभयो भनेर भनेनन् । अनि भन्न थालेका छन् । हेर्नुस त देशभरी प्रधानमन्त्री हिँड्नु भयो र क्या बात क्या बात ? उनीहरुको कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्रीलाई आफू खुब लोकप्रीय भएको भ्रममा परेका छन् ।’
उनले भने ‘तर ख्याल गर्नुस प्रधानमन्त्रीजी, केही वर्षपछि जब तपाइँ इतिहास बन्नु हुन्छ अनि देशका जनताले तपाईँलाई कसरी सम्झने छन भने ‘संविधान निर्माणपछि नयाँ यूगको शुरुआत गर्न अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री आफ्नो सनकले गर्दा सिंगो देशलाई दुर्घटनामा पार्ने पात्रको रुपमा ।’
उनले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै भने ‘नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको पात्रको रुपमा चिन्ने छन् । अनि तपाइँलाई नेपाली जनताले सिंगो संविधानलाई विघटन गर्ने पात्रको रुपमा सम्झने छन् । जनताको जनमतको अपमान गर्ने पात्रको रुपमा चित्रित गरिने छ ।
तपाईको नाममा नेपाली जनताको अधिकार खोस्ने शासकको रुपमा इतिहासमा लेखिने छ ।’
गगनले भने ‘कांग्रेसले केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर भन्न पाउँछ । यो भन्न पाउने हकलाई हाम्रै केही साथिहरुले अल्मल्याउने गर्नु भएको छ ।
लड्डु कांग्रेसका कारण केही शंका उब्जिएको छ । चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिज्ञले सोच्छ । चुनाव जित्नकै लागि कांग्रेस जन्मिएको होइन । आज खेल मैदानमा दुई कम्युनिष्टहरु भिँडीरहेका छन् । उनीहरु भिँडीरहँदा हामीले गोल गर्न सक्छौं हामीलाई सजिलो हुन्छ । तर खेल मैदान नै नरहे के खेल्ने ?’
उनले प्रत्येक कांग्रेसका कार्यकर्तालाई संविधानको पक्ष कि विपक्षमा, अन्यायको पक्षमा कि न्यायको पक्षमा भनी प्रश्न गरे । पार्टीको जुनसुकै तहको नेता हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा बाँधिएको हुनाले सो निर्णयले ओलीको कदम असंवैधानिक भनेर भनिसकेको अवस्थामा कोही पनि अल्मलिनु पर्दैन भने ।
बीपी कोइरालाको कार्यकर्ता हौं भन्ने अनि त्यही विपि कोइरालाले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नु भएको थियो – ‘यो अदालत हो श्रीमान । न्यायको चार किल्ला भित्र न्यायको हत्या नहोस, दायाँ वा वायाँ नहेर्नुस । पर नहेर्नुस, वर नहेर्नुस। न्याय गर्नुस् । विवेक पुर्याउनुस । बीपीका अनुयायी हुँ भन्नेहरु आज रामशाह पथ देख्ने वित्तिकै पर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौं भन्छ भने ति कायरहरु हुुन् । अदालतको बारेमा कांग्रेस बोल्दैन नभनौं । कांग्रेसले बोलिसक्यो ।’
‘अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामीहरु उभिइरहेका छौं । यही संसदले अदालतको सम्मान गर्यौ । हामी अदालतबाट संसदको सम्मान हेर्न चाहन्छौं । श्रीमानहरुले संविधान पल्टाएर हेरिरहनुभएको छ । संविधानको अक्षर र धाराहरु पढीरहनुभएको छ । तर संविधानको धारा र अक्षरहरु शुन्यबाट आएका होइनन् । त्यसको सृजना कहाँबाट भयो ? त्यही संविधानसभाबाट जन्मियो’ थापाले भने ।
नेपालको संविधान अनुसारको प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि त्यसको विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले बेलायत वा अमेरिकाको उदाहरण दिने गरेको भन्दै उनले त्यस देशको संविधानको उदाहरण दिने हो भने त्यही देशको प्रधानमन्त्री हुन सल्लाह दिए ।
‘संविधानको लेखेको कुरा मात्र व्याख्या गर्ने हो । यदी गलत व्याख्या भयो भने अदालतप्रति पनि प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव सदर हुने हो भने यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा जनताको अपमान अर्को हुुन सक्दैन’, उनले भने, ‘केही हेर्नु पर्दैन । संविधान मात्रै हेरिदिए पुुग्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतको अ पनि उच्चारण नगर्दा समेत अबहेलनाका मुद्धा हालिएको भन्दै थापाले संविधानमा नलेखिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत हो भनेर कसैले भन्दै गर्दा अवहेलनाको मुद्धा लगाइन्छ भने अबहेलनाको मुद्धा हामी सबैलाई अबहेलनाको मुद्धा लगाइयो । हामी मुद्धा खेप्न तयार रहेको बताए ।
२०७७ माघ १६, २०: ०६: ५४